Maanta oo Talaado ah Ayaa loo Dhaarin Doonaa Raila Odinga Madaxweynaha Dadka Dalka Kenya.
Maamulka Gobolka Banaadir oo Ka Warbixiyey Qaraxyo Barqanimadii Maanta ka Dhacey Magaalada Muqdisho.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay labo Qarax oo goor dhaw ka dhacay magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane ayaa sheegay in ugu yaraan Labo ruux ay ku dhinteen qaar kalana ku dhaawacmeen Qarax ka dhacay Xaafadda Oodweyne ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayuu sheegay...
Mdaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sugan magaalada Garoowe halkaas oo uu kulamo wadatashi ah kula yeelanayo Madaxda Dowlad Goboleedka Puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa waxaa garoonka ku soo dhoweeyay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas,...
Taliyihii Millateriga Somalia ee Gobolka Galgaduud, Col. Maxamed Kaariye Caraale (Dhega-Dheere) ayaa la xiray, kaddib la sheegay inuu ku lug lahaa dilka sarkaal kasoo goostay Al-shabaab oo dhaweaan lagu dilay Degmada Ceelbuur ee isla gobolkaas. Wararka ayaa sheegaya in taliyaha lagu xiray xabsi ku yaalla degmada Beledweyne ee xarunta gobolka...
Xukuumadda Mareykanka oo ka Hadashey Duqeyn ay u geysatey saldhigyo Daacish ku laheyd Bariga Soomaaliya.
Taliska Mareykanka ee Africa ayaa war ka soo saaray weerar duqeyn ah oo saacadihii la soo dhaafay lagu qaaday saldhigyo Daacish ku lahaayeen waqooyi bari Soomaaliya, gaar ahaan buuraleyda Buqa ee agagaarka degmada Qandala ee Gobolka Bari. Labo weerar oo cirka ayaa lagu beegsaday saldhigyo Daacish ku sugnaayeen oo ku...
War ka soo baxay maamulka Galmudug ayaa ku eedeynaya xukuumada Soomaaliya in ay wali ka wadaan deegaannada Galmudug dhaqdhaaqyo siyaasadeed oo ka dhan ah madaxweyne Axmed Ducaalle Geelle Xaaf. Warkan ayaa shaki galinaya ka qeybgalka Galmudug ee shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isugu yeeray...
Dowladda Kenya ayaa lagu waramayaa in ay ciidamo dheeraad ah geysay xarumaha isgaarsiinta ee ku yaalla gobolka Waqooyi Barri ee dalka Kenya, kaddib markii dhowr jeer oo hore xarumahaasi lagu bur buriyay weeraro ay soo qaadeen Al-shabaab. Ciidamadan Kenya ay geysay xarumaha isgaarsiinta ayaa loogu talagalay in ay ilaaliyaan Anteenooyinka...
Waxey aheyd dhacdo cajiib ah oo isugu jirtay badbaadin iyo naf hurnimo kaddib markii Haweenney ku dul Umushay diyaarada Jubba Airways xili ay ku jirtay dulimaadkeedii caadiga ahaa. Diyaarada oo ka soo duushay magaalada Hargeysa kuna soo jeeday Muqdisho dullimaadkeeduna ahaa ilaa Nairobi ayaa xili ay dulmareysay deegaanka Qabri Dahare...
Dawlada Soomaaliya oo Hub Kenya Laga Soo Qaaday Dib ugu Celisay Dawlada Kenya//
Ciidamada Soomaaliya ee Somali National Army (SNA) ayaa shalay yeeshay shir looga hadlayay ammaanka kaasoo ay la qaateen koox dawlada Kenya u qaabilsan arimaha ammaanka. Waxaa sidoo kale ciidanka Soomaaliya ee SNA uu ku wareejiyay hub laga helay Balad Xaawo Talaadadii kaasoo markii hore laga soo xaday ama laga soo...